တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 16.5.2019 မှ 22.5.2019 အထိ...! - Thadin
Homeဗေဒင်ယတြာတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 16.5.2019 မှ 22.5.2019 အထိ…!
May 16, 2019 Kay Kay ဗေဒင်ယတြာ Comments Off on တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 16.5.2019 မှ 22.5.2019 အထိ…!
ဒီကာလအတွင်း အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာထွက်စာတင်ထားသူ များဒီကာလမှာထွက်ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုအားကိုးမရတာမျိုးတွေဖြစ် ရတတ်ပါတယ်။ လူငယ်များ မိတ်ဆွေတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေကိုအယုံမလွယ်ပါနဲ့။
ပစ္စည်းတစ်ခုခုလာငှားပြီး ရောင်းစားလိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများဘယ်သူကိုမှမငှားလိုက်ပါနဲ့။ မိခင်၊ ဖခင်ရှိသူများ မိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်လိုက်ပါ။ အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး ချစ်သူနှစ်ဦးချိန်းဆိုထား ရင်ပျက်ရတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေးကိစ္စတွေအစီအစဉ်ဆွဲလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျန်းမာရေးကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် ကအားနည်းချက်လေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကိုလဲသတိထားပါ။ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ပျက်ရင် တော့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပဲခိုင်းစေလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အဆင်ပြေလိုက်၊ရန်ဖြစ် လိုက်ဆိုတာမျိုးလဲ အလွန်ပဲဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
ပညာရေးကံကောင်းပေမယ့်မိမိကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါဝင်စားမှုအား နည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကျိုးပေးဂဏန်း 5/6/8
အထူးဟော မိတ်ဆွေတွေကိုသတိထားပြီး ပေါင်းသင်းလိုက်ပါ။ယတြာ မုန့်ဟင်းခါးဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ဒီကာလအတွင်း အဘက်ဘက်ကတိုးတတ်မှုတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုတိုးတတ်ဖို့လဲ စိတ်၏ပင်ပန်းခြင်း ၊ကိုယ်ရဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်စီးပွားတွေကလဲ အဝေးမှာပိုမိုအကျိုးပေးပါတယ်။ ရပ်ဝေးက အလုပ်အကိုင်တွေပိုမိုတိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ ဆီး၊၀မ်း၊လေမှန်အောင်ပြုလုပ်ပေး ပါ။
အဲဒါဆိုနေထိုင်ကောင်းမဲ့ကာလပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်များ အလုပ်တွေကျပါလိမ့်မယ်။ ဖောက်သည်တွေရလာပါ လိမ့်မယ်။စေတနာထားပြီးလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီကာလဟာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရနိုင်တာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ မိမိ တို့လိုလားတောင်းတတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။
၀န်ထမ်းများ ခက် ခဲတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေယူနေရတတ်ပါတယ်။ မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတာမျိုးတွေလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းရေး ကိစ္စတွေမှာတော့ အဆင်မပြေတာများပါတယ်။ အတူနေတဲ့အိမ်သားတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ် ထောင်ဘက်နေရာကနေ အစားဝင်ခံစားပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ငွေလက်လွယ်နေတာမျိုးရှိရင်တော့ ဆင်ခြင်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ပညာရေးကတော့ ကိစ္စတွေများနေတာကြောင့် သေချာအာရုံစိုက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။အကျိုးပေးဂဏန်း ၃၊၆၊၀ အထူးဟော ငွေအထွက်များနေမည်။ယတြာ သရက်သီးမှည့်ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
စိတ်ကူးထားသမျှ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိအကြံပေးမှုကြောင့် အခြားသူတွေတောင်လမ်း ကြောင်းမှန်ကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ကံကြမ္မာရဲ့ဖေးမမှု မိမိရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် တဆင့်မြင့်သောအနေအ ထားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ လူယုံထားတာမျိုးတွေ၊ ၀န်ထမ်းအသစ်ခန့်တာမျိုးတွေအထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။
မိမိလုပ်ငန်းခွင်ထဲ ပျက်စီးနေတဲ့ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအစားထိုးလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းမျိုးဆောင်ရွက် နိုင်ပါတယ်။ အတိတ်ကမိမိကူညီပေးဖူးတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ကောင်းကျိုးပြုတာမျိုးကိုလဲခံစားရတတ်ပါတယ်။ အစိဏ္ဏကံကုသိုလ်အမြဲလုပ်နေသူများ ဒီကာလမှာထီကံစမ်းခြင်းဖြင့်ရလဒ်ကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကတော့ အညံ့အဆိုးကင်းနေမှာပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှအလေးပေးဆောင် ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဆေးစစ်တာ၊ဆေးဝါးမှီဝဲတာတွေအထူးကောင်းပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ဝေးကွာနေတဲ့ချစ် သူဆီကအဆက်အသွယ်ပြန်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အညံ့အဆိုးနည်းပါတယ်။သာယာပါလိမ့် မယ်။
ပညာရေးကံကောင်းနေတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားပါပဲ။အကျိုးပေးဂဏန်း 1/3/7 အထူးဟော ကံမြင့်နေမှာပါ။ ယတြာ နှင်းဆီပန်း ၇ပွင့်ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ဒီကာလအတွင်း ဖန်တီးမှုအသစ်၊စိတ်ကူးမှုအသစ်တွေကို ပိုမိုတိုးတတ်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ကူးခံစားချက်နဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေက ပိုမိုတိုးတတ်နိုင်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်များ၊ သရုပ်ဆောင်၊သီချင်း ၊ဂီတနှင့်စာပေ၊ပန်းချီဆွဲခြင်းများ အထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။
အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဖန်တီးမှုအသစ်တွေ ကြောင့်အခြားလုပ်ငန်းပြိုင်တွေထက်နှာတဖျားသာပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ လာဘ်ရွှင်နေတာ ကိုတွေ့ရတယ်။ အဘက်ဘက်က ငွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလဲ တောင်းလို့အလွန် ကောင်းပါတယ်။ ငွေကြေးရင်းနှီမြုပ်နှံခြင်းများ အကျိုးများနိုင်တဲ့နေ့ရက်တွေပါပဲ။
စိတ်ချမ်းသာစရာတွေများပါလိမ့် မယ်။ မိသားစုအပျော်ခရီးများသွားမယ်ဆိုသင့်တော်တဲ့ကာလပါပဲ။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ စန်းအားကောင်း နေတာကြောင့် ချစ်သူသစ်ရလာပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူကိုဖွင့်ပြောမယ်ဆိုလဲသင့်တော်တဲ့နေ့ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့အညံ့အဆိုးနည်းပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးသာယာပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပညာရေးမှာတော့ ပညာအသစ်တစ်ခုစတင်သင်ယူလို့ကောင်းပါတယ်။အကျိုးပေးဂဏန်း 1/2/8 အထူးဟော စိတ်ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။ ယတြာ အကြော်ဘုရားကပ်လှူပါ။
ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီး အလွဲလွဲအမှားမှာတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရနိုင်ပါ တယ်။ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေကိုတော့ သတိနဲ့ယှဉ်ပြီးလုပ်ပါ။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဆရာသမားတွေရဲ့စကားကို လိုက်နာပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ချွန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အမှားအယွင်များတတ်ပါတယ်။ လူလိမ်ခံရတတ်ပါတယ်။
ဒါ ကြောင့်လူယုံသတ်တာမျိုးတွေလဲခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှသဘောထားကွဲလွဲစ ရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပက်သက်သောလုပ်ငန်းများလဲ အထူးအညံ့များနေတတ်ပါတယ်။ ပညာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများထင်သလောက်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတာမျိုးတွေဖြစ်ရပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး တော့လဲဒီနေ့မှာအားနည်းတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားနည်းနေတဲ့အတွက်အားရှိအောင်နေပါ။ မိမိဖြစ်ချင်တာတွေ ကိုတော့ ဦးစားပေးလို့မသင့်သေးတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ ထင်ထားသည်ထက်ပိုမို အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာလဲအညံ့အဆိုးကင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ပညာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ အညံ့များနေတတ်ပါတယ်။သေချာကြိုးစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။အကျိုးပေးဂဏန်း 2/3/5
အထူးဟော ကံအားနည်းနေချိန်ပါ။ ယတြာ ပျားရည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မုန့်တစ်မျိုးမျိုးဘုရားကပ်လှူပေးပါ။
ဒီကာလအတွင်း အခွင့်အရေးနှစ်မျိုးနှစ်ခွဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ကလုပ်ချင်နေတဲ့ကိစ္စတွေ ကိုတော့ အထူးဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ပါ။ ခရီးကိစ္စများလဲအထူးတိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ခရိးသွားလုပ်ငန်းများ အထူးတိုး တတ်ပါလိမ့်မယ်။သူတစ်ပါးတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့တွေအများကြီးရလာတတ်ပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာမှု တွေကိုဦးစားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်အတွင်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လဲ ဒီကာလမှာဆောင်ရွက်လို့ သင့်ပါတယ်။ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများလဲဝယ်ယူလို့အထူးသင့်ပါတယ်။ သားသမီးကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးအ၀င်များပါတယ်။ ငွေရှာလို့ အထူးကောင်းပါတယ်။
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပြီးငွေစုခြင်းများ အထူးကောင်းပါတယ်။ တတ်သိထားသော စီးပွားရေးများကို အကောင်အထည်မဖော်ရသေးရင်အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ပါ။ လုပ်ငန်းသစ်အကျိုးပေးပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်းပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ပျော်စရာ တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ အဆင်မပြေတာတွေကိုပြေလည်အောင်စွမ်းဆောင် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအတွက်အသက်မွေးမှုပညာတွေစတင်သင်ယူပါ။အကျိုးပေးဂဏန်း 3/4/6 .. အထူးဟော စိတ်ချမ်းသာစရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ယတြာ သံပုရာရည်ဘုရားကပ်လှူဆုတောင်းပါ။
ဒီကာလအတွင်းငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ ဘောနပ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အလုပ်များရောင်းမကုန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ အထူးရောင်းထွက်ပါလိမ့်မယ်။ မြုပ်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေ ပြန်ပေါ် လာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေအဆင်ပြေလာတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လဲ အညံ့ အဆိုးကင်းနေတတ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆီမှအကူအညီကောင်းတွေရလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပက် သက်ပြီး ဆိုင်သစ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလအတွင်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လို့အထူးကောင်းပါတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ အကူအညီတွေကိုလဲ ရလာတတ်ပါတယ်။ပင်ပန်းနေပေမဲ့ အဆင်ပြေတော့စိတ်ချမ်းသားရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးနယ်ခရီးသွားရတတ်ပါတယ်။
အဆင်ပြေတဲ့ခရီးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လူမျိုးခြား၊တစ်စိမ်းတစ်ရံတွေနဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းများ ပိုမိုတိုးတတ်နေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ အလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့် ချစ်သူ ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ သာယာပျော်ရွှင်မှုတွေအတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပညာ ရေးကံက သင့်ပါတယ်။
ဥာဏ်ဝီရိယထားကြိုးစားလိုက်ပါ။အကျိုးပေးဂဏန်း 9/5/7 …အထူးဟော အလုပ်ကောင်းနေမည်။ ယတြာ မွေးနံထောင့်မှာထီးဖြူ ၅လက်လှူဒါန်းပါ။
ဆရာငြိမ်းအေးလူ ( ဗေဒင်သုတေသီ ) 09775555695 ..09445555695
ဒီကာလအတှငျး အလုပျနဲ့ပကျသကျပွီးအပွောငျးအလဲဖွဈရတတျပါတယျ။ အလုပျမှာထှကျစာတငျထားသူ မြားဒီကာလမှာထှကျရတတျပါတယျ။ အလုပျနဲ့ပကျသကျပွီး လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေိုအားကိုးမရတာမြိုးတှဖွေဈ ရတတျပါတယျ။ လူငယျမြား မိတျဆှတှေေ၊သူငယျခငျြးတှကေိုအယုံမလှယျပါနဲ့။
ပစ်စညျးတဈခုခုလာငှားပွီး ရောငျးစားလိုကျတာမြိုးတှကွေုံရတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့အဖိုးတနျပစ်စညျးမြားဘယျသူကိုမှမငှားလိုကျပါနဲ့။ မိခငျ၊ ဖခငျရှိသူမြား မိဘတှရေဲ့ကနျြးမာရေးကိုအထူးဂရုစိုကျလိုကျပါ။ အခဈြရေးနဲ့ပကျသကျပွီး ခဈြသူနှဈဦးခြိနျးဆိုထား ရငျပကျြရတတျပါတယျ။အခဈြရေးကိစ်စတှအေစီအစဉျဆှဲလို့ရမှာမဟုတျပါဘူး။
ကနျြးမာရေးကတော့ မိမိကိုယျတိုငျ ကအားနညျးခကျြလေးတှရှေိနတေတျပါတယျ။ လြှပျစဈအန်တရာယျကိုလဲသတိထားပါ။ အိမျတှငျးလြှပျစဈပကျြရငျ တော့ ကြှမျးကငျြသူတှကေိုပဲခိုငျးစလေိုကျတာပိုကောငျးပါတယျ။ အိမျထောငျရေးမှာတော့ အဆငျပွလေိုကျ၊ရနျဖွဈ လိုကျဆိုတာမြိုးလဲ အလှနျပဲဖွဈလှယျပါတယျ။
ပညာရေးကံကောငျးပမေယျ့မိမိကိုယျတိုငျက စိတျပါဝငျစားမှုအား နညျးနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။အကြိုးပေးဂဏနျး 5/6/8
အထူးဟော မိတျဆှတှေကေိုသတိထားပွီး ပေါငျးသငျးလိုကျပါ။ယတွာ မုနျ့ဟငျးခါးဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
ဒီကာလအတှငျး အဘကျဘကျကတိုးတတျမှုတှရှေိနတေတျပါတယျ။ ဒီလိုတိုးတတျဖို့လဲ စိတျ၏ပငျပနျးခွငျး ၊ကိုယျရဲ့ပငျပနျးခွငျးတှကွေုံရတတျပါတယျ။ အလုပျစီးပှားတှကေလဲ အဝေးမှာပိုမိုအကြိုးပေးပါတယျ။ ရပျဝေးက အလုပျအကိုငျတှပေိုမိုတိုးတတျပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လဲ ဆီး၊ဝမျး၊လမှေနျအောငျပွုလုပျပေး ပါ။
အဲဒါဆိုနထေိုငျကောငျးမဲ့ကာလပါပဲ။ ကိုယျပိုငျဆိုငျမြား အလုပျတှကေပြါလိမျ့မယျ။ ဖောကျသညျတှရေလာပါ လိမျ့မယျ။စတေနာထားပွီးလုပျတဲ့သူတှအေတှကျ ဒီကာလဟာအသိအမှတျပွုခွငျးခံရနိုငျတာ ကိုတှရေ့ပါတယျ။ မိမိ တို့လိုလားတောငျးတတဲ့ ကိစ်စတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးမဲ့ မိတျဆှကေောငျးတှရှေိနတေတျပါတယျ။
ဝနျထမျးမြား ခကျ ခဲတဲ့အလုပျတာဝနျတှယေူနရေတတျပါတယျ။ မနိုငျဝနျထမျးနရေတာမြိုးတှလေဲဖွဈတတျပါတယျ။ အိမျတှငျးရေး ကိစ်စတှမှောတော့ အဆငျမပွတောမြားပါတယျ။ အတူနတေဲ့အိမျသားတှနေဲ့အဆငျမပွဖွေဈရတတျပါတယျ။ အိမျ ထောငျဘကျနရောကနေ အစားဝငျခံစားပေးတတျဖို့လိုပါတယျ။ ငှလေကျလှယျနတောမြိုးရှိရငျတော့ ဆငျခွငျဖို့ ပွောခငျြပါတယျ။
ပညာရေးကတော့ ကိစ်စတှမြေားနတောကွောငျ့ သခြောအာရုံစိုကျဖို့ခကျခဲပါတယျ။အကြိုးပေးဂဏနျး ၃၊၆၊၀ အထူးဟော ငှအေထှကျမြားနမေညျ။ယတွာ သရကျသီးမှညျ့ဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
စိတျကူးထားသမြှ အကောငျအထညျဖျောနိုငျပါလိမျ့မယျ။ မိမိအကွံပေးမှုကွောငျ့ အခွားသူတှတေောငျလမျး ကွောငျးမှနျကိုရောကျသှားတတျပါတယျ။ ကံကွမ်မာရဲ့ဖေးမမှု မိမိရဲ့ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ တဆငျ့မွငျ့သောအနအေ ထားကိုရရှိနိုငျပါတယျ။ လူယုံထားတာမြိုးတှေ၊ ဝနျထမျးအသဈခနျ့တာမြိုးတှအေထူးဆောငျရှကျလို့ကောငျးပါတယျ။
မိမိလုပျငနျးခှငျထဲ ပကျြစီးနတေဲ့ ဟောငျးနှမျးနတေဲ့ပစ်စညျးတှကေိုအစားထိုးလဲလှယျတပျဆငျခွငျးမြိုးဆောငျရှကျ နိုငျပါတယျ။ အတိတျကမိမိကူညီပေးဖူးတဲ့သူတှကေ ပွနျလညျကောငျးကြိုးပွုတာမြိုးကိုလဲခံစားရတတျပါတယျ။ အစိဏ်ဏကံကုသိုလျအမွဲလုပျနသေူမြား ဒီကာလမှာထီကံစမျးခွငျးဖွငျ့ရလဒျကောငျးတှထှေကျပျေါလာတတျပါတယျ။
ကနျြးမာရေးကတော့ အညံ့အဆိုးကငျးနမှောပါ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ပကျသကျတဲ့ကိစ်စတှမှေနျသမြှအလေးပေးဆောငျ ရှကျသငျ့ပါတယျ။ ဆေးစဈတာ၊ဆေးဝါးမှီဝဲတာတှအေထူးကောငျးပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ဝေးကှာနတေဲ့ခဈြ သူဆီကအဆကျအသှယျပွနျရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးမှာတော့ အညံ့အဆိုးနညျးပါတယျ။သာယာပါလိမျ့ မယျ။
ပညာရေးကံကောငျးနတေဲ့ကာလအပိုငျးအခွားပါပဲ။အကြိုးပေးဂဏနျး 1/3/7 အထူးဟော ကံမွငျ့နမှောပါ။ ယတွာ နှငျးဆီပနျး ၇ပှငျ့ဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
ဒီကာလအတှငျး ဖနျတီးမှုအသဈ၊စိတျကူးမှုအသဈတှကေို ပိုမိုတိုးတတျအောငျလုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။ စိတျကူးခံစားခကျြနဲ့လုပျရတဲ့အလုပျတှကေ ပိုမိုတိုးတတျနိုငျပါတယျ။ အနုပညာအလုပျမြား၊ သရုပျဆောငျ၊သီခငျြး ၊ဂီတနှငျ့စာပေ၊ပနျးခြီဆှဲခွငျးမြား အထူးဆောငျရှကျလို့ကောငျးပါတယျ။
အလုပျနဲ့ပကျသကျပွီး ဖနျတီးမှုအသဈတှေ ကွောငျ့အခွားလုပျငနျးပွိုငျတှထေကျနှာတဖြားသာပါလိမျ့မယျ။ ငှကွေေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လဲ လာဘျရှငျနတော ကိုတှရေ့တယျ။ အဘကျဘကျက ငှဝေငျလာတတျပါတယျ။ ရစရာရှိတဲ့ငှကွေေးတှကေိုလဲ တောငျးလို့အလှနျ ကောငျးပါတယျ။ ငှကွေေးရငျးနှီမွုပျနှံခွငျးမြား အကြိုးမြားနိုငျတဲ့နရေ့ကျတှပေါပဲ။
စိတျခမျြးသာစရာတှမြေားပါလိမျ့ မယျ။ မိသားစုအပြျောခရီးမြားသှားမယျဆိုသငျ့တျောတဲ့ကာလပါပဲ။ အခဈြရေးကိစ်စတှမှောတော့ စနျးအားကောငျး နတောကွောငျ့ ခဈြသူသဈရလာပါလိမျ့မယျ။ ခဈြသူကိုဖှငျ့ပွောမယျဆိုလဲသငျ့တျောတဲ့နရေ့ကျတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့အညံ့အဆိုးနညျးပါတယျ။ အိမျထောငျရေးသာယာပြျောရှငျရပါလိမျ့မယျ။
ပညာရေးမှာတော့ ပညာအသဈတဈခုစတငျသငျယူလို့ကောငျးပါတယျ။အကြိုးပေးဂဏနျး 1/2/8 အထူးဟော စိတျခမျြးသာရပါလိမျ့မယျ။ ယတွာ အကွျောဘုရားကပျလှူပါ။
ငှကွေေးနဲ့ပကျသကျပွီး အလှဲလှဲအမှားမှာတှဖွေဈရတတျပါတယျ။ သူတဈပါးရဲ့ဒုက်ခပေးခွငျးကိုခံရနိုငျပါ တယျ။ငှပေေးငှယေူကိစ်စတှကေိုတော့ သတိနဲ့ယှဉျပွီးလုပျပါ။ အလုပျနဲ့ပကျသကျပွီး ဆရာသမားတှရေဲ့စကားကို လိုကျနာပါ။ မိမိကိုယျတိုငျခြှနျပွီးလုပျမယျဆိုရငျတော့ အမှားအယှငျမြားတတျပါတယျ။ လူလိမျခံရတတျပါတယျ။
ဒါ ကွောငျ့လူယုံသတျတာမြိုးတှလေဲခံစားရတတျပါတယျ။ ကုသိုလျရေးလုပျမယျဆိုရငျတောငျမှသဘောထားကှဲလှဲစ ရာတှမြေားနတေတျပါတယျ။ ပညာရေးနဲ့ပကျသကျသောလုပျငနျးမြားလဲ အထူးအညံ့မြားနတေတျပါတယျ။ ပညာ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြားထငျသလောကျအကြိုးမဖွဈထှနျးတာမြိုးတှဖွေဈရပါတယျ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ပကျသကျပွီး တော့လဲဒီနမှေ့ာအားနညျးတတျပါတယျ။ ကိုယျခံအားနညျးနတေဲ့အတှကျအားရှိအောငျနပေါ။ မိမိဖွဈခငျြတာတှေ ကိုတော့ ဦးစားပေးလို့မသငျ့သေးတာမြိုးတှရေ့ပါတယျ။ အခဈြရေးကိစ်စတှမှောတော့ ထငျထားသညျထကျပိုမို အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။ အိမျတှငျးရေး၊အိမျထောငျရေးကိစ်စတှမှောလဲအညံ့အဆိုးကငျးနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။
ပညာရေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လဲ အညံ့မြားနတေတျပါတယျ။သခြောကွိုးစားတတျဖို့လိုပါတယျ။အကြိုးပေးဂဏနျး 2/3/5
အထူးဟော ကံအားနညျးနခြေိနျပါ။ ယတွာ ပြားရညျနဲ့လုပျထားတဲ့မုနျ့တဈမြိုးမြိုးဘုရားကပျလှူပေးပါ။
ဒီကာလအတှငျး အခှငျ့အရေးနှဈမြိုးနှဈခှဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့မိမိစိတျကလုပျခငျြနတေဲ့ကိစ်စတှေ ကိုတော့ အထူးဦးစားပေးလုပျကိုငျပါ။ ခရီးကိစ်စမြားလဲအထူးတိုးတတျပါလိမျ့မယျ။ခရိးသှားလုပျငနျးမြား အထူးတိုး တတျပါလိမျ့မယျ။သူတဈပါးတှရေဲ့အကူအညီအထောကျအပံ့တှအေမြားကွီးရလာတတျပါတယျ။
စိတျခမျြးသာမှု တှကေိုဦးစားပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။အိမျအတှငျးလိုအပျတဲ့ပစ်စညျးမြားဝယျယူမယျဆိုရငျလဲ ဒီကာလမှာဆောငျရှကျလို့ သငျ့ပါတယျ။ အိမျဆောကျပစ်စညျးမြားလဲဝယျယူလို့အထူးသငျ့ပါတယျ။ သားသမီးကွောငျ့စိတျခမျြးသာရတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ငှကွေေးအဝငျမြားပါတယျ။ ငှရှောလို့ အထူးကောငျးပါတယျ။
ဘဏျစာရငျးဖှငျ့ပွီးငှစေုခွငျးမြား အထူးကောငျးပါတယျ။ တတျသိထားသော စီးပှားရေးမြားကို အကောငျအထညျမဖျောရသေးရငျအကောငျအထညျ ဖျောလိုကျပါ။ လုပျငနျးသဈအကြိုးပေးပါတယျ။ကနျြးမာရေးကတော့ကောငျးပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ပြျောစရာ တှကွေုံရတတျပါတယျ။
အိမျထောငျရေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့ အဆငျမပွတောတှကေိုပွလေညျအောငျစှမျးဆောငျ နိုငျပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးအတှကျအသကျမှေးမှုပညာတှစေတငျသငျယူပါ။အကြိုးပေးဂဏနျး 3/4/6 .. အထူးဟော စိတျခမျြးသာစရာတှမြေားနတေတျပါတယျ။ယတွာ သံပုရာရညျဘုရားကပျလှူဆုတောငျးပါ။
ဒီကာလအတှငျးငှကွေေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လဲ ဘောနပျရတာမြိုးတှကွေုံရတတျပါတယျ။ ကိုယျပိုငျ အလုပျမြားရောငျးမကုနျတဲ့ပစ်စညျးတှကေိုတော့ အထူးရောငျးထှကျပါလိမျ့မယျ။ မွုပျနှံထားတဲ့ငှကွေေးတှေ ပွနျပျေါ လာတတျပါတယျ။ အလုပျတှအေဆငျပွလောတာမြိုးကွုံရတတျပါတယျ။ကနျြးမာရေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လဲ အညံ့ အဆိုးကငျးနတေတျပါတယျ။
မိတျဆှကေောငျးတှဆေီမှအကူအညီကောငျးတှရေလာတတျပါတယျ။ အလုပျနဲ့ပကျ သကျပွီး ဆိုငျသဈဖှငျ့မယျဆိုရငျတော့ဒီကာလအတှငျးဖှငျ့လှဈဆောငျရှကျလို့အထူးကောငျးပါတယျ။သူတဈပါးရဲ့ အကူအညီတှကေိုလဲ ရလာတတျပါတယျ။ပငျပနျးနပေမေဲ့ အဆငျပွတေော့စိတျခမျြးသားရပါလိမျ့မယျ။ အလုပျနဲ့ ပကျသကျပွီးနယျခရီးသှားရတတျပါတယျ။
အဆငျပွတေဲ့ခရီးတှဖွေဈပါလိမျ့မယျ။ လူမြိုးခွား၊တဈစိမျးတဈရံတှနေဲ့ ဆကျစပျလုပျကိုငျခွငျးမြား ပိုမိုတိုးတတျနပေါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးကိစ်စတှမှောတော့ အလုပျကိစ်စတှကွေောငျ့ ခဈြသူ ကိုအခြိနျမပေးနိုငျဖွဈရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးကတော့ သာယာပြျောရှငျမှုတှအေတိဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ပညာ ရေးကံက သငျ့ပါတယျ။
ဉာဏျဝီရိယထားကွိုးစားလိုကျပါ။အကြိုးပေးဂဏနျး 9/5/7 …အထူးဟော အလုပျကောငျးနမေညျ။ ယတွာ မှေးနံထောငျ့မှာထီးဖွူ ၅လကျလှူဒါနျးပါ။
ဆရာငွိမျးအေးလူ ( ဗဒေငျသုတသေီ ) 09775555695 ..09445555695
ယခုခေတ်၏လေးစား အားကျ ဖွယ်ကောင်း သော စံပြမိသားစုအ ကြောင်း…!
This Year : 232555
Total Users : 591579
Total views : 2713778